Iharan’ny Tsindrinà Filoha Mpampihorohoro ny Media ao Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Iharan'ny Tsindrinà Filoha Mpampihorohoro ny Media ao Kyrgyzstan
Voadika ny 17 Avrily 2017 7:49 GMT
Pikantsary tamin’ny fandefasana ny Oi Ordo, fandaharana fanaovana resadresaka, tao amin’ilay fantsona fahitalavi-panjakana ofisialy ao Kyrgyzstan. Horonantsary nozaraina tamin'ny alàlan'ny fantsona ofisialin'ilay fahitalavi-panjakana ao amin'ny Youtube.
Nandritra ny fizaràna nivoaka farany tamin'ny fandaharana fitafatafàna Oi Ordo izay mitondra ny lohateny hoe ‘Fahalalahana Miteny sa Fanendrikendrehana?’, nitsatsaingoka matetika an'ireo manampahaizana avy amin’ny haino amanjery tsy miankina nanome ny heviny momba ny fahalalahan’ny fanaovangazety ao Kyrgyzstan ny mpandrindra ilay fandaharana, Maxim Poletayev, raha nanefa tsara ny adidiny kosa izy manoloana ny fihainoana ny solontenan’ny fitondràna tanatin'ny fandaharana.
Maro tamin’ireo mpampiasa ny media sosialy naneho hevitra tamin’ilay fizaràna nalefa tao amin'ny fantsona fahitalavi-panjakana ofisialin'i Kyrgyzstan no nahita ny fitondran-tenan’ilay mpandray vahiny ho toy ny endrika mivantana mampiseho ny fomba fiasan'ny fitondrana eo amin'ny lafiny fahalalahan’ny haino amanjery: afaka miteny zavatra foana ianao rehefa tsy raharahan’ny fitondrana fotsiny izay lazainao.
Amin’izao fotoana izao, haino amanjery telo mpandefa vaovao no enjehin’ny mpampanoa lalànam-panjakana noho ny findramana tenin’olona mitsikera ny Filoha Almazbek Atambayev sy ny Antoko Sosialy Demôkratikan’i Kyrgyzstan misy azy. “Fanendrikendrahana” ny Filoha Almazbek Atambayev sady fanimbàna ny “voninahitra sy ny fahamendrehany” ireo teny nindramina ireo, izany no tohankevitr'ilay mpampanoa lalàna. Araka izany, hoy izy, dia tompon’andraikitra amin’ny fitaterana azy ireny ireto haino aman-jery ireto.
Miatrika onitra 15.000 Dolara ka hatramin’ny 150.000 Dolara ireo media telo ireo, izay hita ihany koa fa haino amanjery mpitsikera indrindra ny fitondràna, ary notapahan'ireo manampahefana ny kaonty bankin’ny roa amin’izy ireo nialohan’ny fitsaràna.
Manantitra ireo manampahaizana momba ny haino amanjery fa miaro ny mpanao gazety amin’ny andraikitra manoloana ny fahamarinam-pototry ny vaovao lazainy anatin'ny tatitra ataony ny lalànan'ity firenena ao Azia Afovoany ity. Amin’ny tena izy anefa, azo enjehina eo ambanin'ireo lalàna manjavozavo kokoa momba ny fanalam-baraka ny mpanao gazety, ary ny fahabetsahan'ny tranga tahaka izany no mampitombo ny fanivanan-tena amin’ny fanaovana tatitra.
Nanendrikendrika matetika ireo mpanao gazety sy mpikatroka mafana fo momba ny zon’olombelona ity Filoha Atambayev ity nandritra izay enin-taona nitondrany izay ary tsy mbola nisy nahavita nanenjika azy noho izany fanaony izany, izay mampiseho ny karazam-pitongilanana eo amin’ny fitsaràna hatrehan'ireo media raha tonga eny amin’ny fitsaràna ny resaka.
Tsy izahay no niteny izany, fa ry zareo…
Araka ny voalaza tanatin'ireo tranga rehetra, afa-tsy ny iray tamin'izany, dia nitatitra ny fiampangàna ny filoha sy ny antokony nataon’ireo nametram-panontaniana azy fotsiny ireo haino amanjery.
Fiampangàna fa nitondra entana ho an'ny fianakavian’ny filoha ny fiaramanidina iray nandalo tao an-toerana, izay niafàra tamin'ny fianjerany tao aminà vohitra iray ka nahafaty olona 39. Ireo mpisolovava avy ao aminà antoko mpanohitra no nanao ity fiampangàna ity, ny mpitarika azy ireo izay nampidirina am-ponja noho ny ady mangidy nifanaovany tamin'i Atambayev. Tsy nanary ny ahiahy momba ireo filazana tsy marim-pototra ireo ilay lahatsoratra notaterin’ny Zanoza.kg, media tsy miankina, ary tsy nanome ny toerana misy ny fitondràna, fa nomena lohateny tamin’ny fomba izay mampiseho mazava ny fitaterany fotsiny ny toeran’ny iray amin'ireo antoko tafiditra anatin'ny ady: Mpisolovavan'i Tekebayev : An’ny Fianakavian’ny Filoha ilay Entana tao anatin’ilay Fiaramanidina izay Nianjera.
Fiampangàna iray misaraka nataonà mpiaro ny zon’olombelona izay nilaza fa ” nivarotra toerana [ao amin'ny fitondràna] any ankavia sy havanana, ary afovoany” ny antokon'ny filoha, izay nentin'ny media tsy miankina 24.kg
Fiampangàna iray hafa nataon’ireo mpisolovavan'ilay mpanohitra voafonja, Tekebayev, milaza fa mifandray amin’ny fitsidihany vao haingana an’i Cyprus mba hanaovany fanadihadihana momba ny tombontsoan’i Atambayev eo amin'ny lafiny fandraharahàna ny fitanana azy am-ponja. Tamin’ity indray mitoraka ity dia ny Azattyk, sampana Kyrgyz ao amin'ny RFE/RL, izay vatsian’ny Kongresin’i Etazonia, no nitatitra ny teny, .
Mifikira mafy, fotoan'ny fifidianana izao!
Tahaka an'i Donald Trump, Filoham-pirenena any Etazonia, nanakiana mafy imbetsaka ireo haino amanjery mpitsikera azy i Atambayev amin’ny fitateran’izy ireo, miampanga azy ireo ho mampiely vaovao mivilana sy miasa ho an’ny tombontsoan’ireo fanjakana any ivelany sy ireo mpamatsy vola.
Nomarihan'ny sasany ny mahatsikaiky amin'ny zava-misy ankehitriny, satria rehefa ny tenan'i Atambayev mihitsy no endrika iray enti-maneho ireo mpanohitra niharan'ny famoretana talohan'ny hetsi-panovàna Kyrgyz faharoa tamin’ny 2010, dia nidera ny haino amanjery Azattyk novatsian'ny kongresy ho isan'ireo media vitsy mitsikera ny fitondrana tsy refesi-mandidin'i Bakiyev izy.
Ary izao, rehefa izy no eo amin’ny seza fitondràna, tsy dia ilainy loatra ny masoivohom-baovao malaza izay manana ny lazany amin'ny fitateram-baovao mahaleotena ao an-toerana sy manana famatsiam-bola tsy tapaka avy amin'ny sampan-draharaham-panjakana.
Mahavariana kokoa noho ny famelezany tsy an-kiato an'ireo media mpitsikera, angamba, ny fandroahana ilay mpamoaka lahatsoratra avy amin'ny sampan’ny haino amanjery Regnum.ru ao an-toerana, masoivohom-baovao izay ao Moskoa no foibeny ary voalazan’ireo mpitsikera fa loharanon'ireo fampielezankevitra tsy tapaka ho an’ny mpiara-dia amin’i Atambayev ao amin’ny fitondràna Rosiana.
Nandritra ny fitondràna mitraotraotra, zava-dehibe ho an’i Atambayev ny fanohanan’ny Rosiana amin’ny fiarovana ny fankamamian'ny vahoaka azy anivonà mponina izay mifandray be amin’i Rosia, zava-misy izay mahatonga ny fanapahankevitra ny andà ny fiverenan’i Grigory Mikhailov ao amin’ny firenena taorian'ny fandikan-dalàna madinika momba ny fitsipiky ny asa ho loharanom-binany.
Voatonona tanatin'ny iray amin'ireo lahatsoratra izay novinanian'ireo mpampiasa media sosialy Kyrgyz ho mety nanampy tosika ny fandraràna ny fidiran’i Mikhailov ao amin’ny firenena ny fangatahan’ny mpanohitra ny mba anaovan’i Atambayev fitsapàna saina noho ny fanaovany tsikera manivaiva momba ny antoko Ata-Meken.
Ny anakiray indray dia tafatafa maharitra niarahana taminà mpanao pôlitika mpanan-karena iray, izay eritreretin’ny olona ho lohalaharana amin'ny fandimbiasana an'i Atambayev anatin'ireo fifidianana hatao amin’ny Novambra ho avy izao, kanefa mety tsy izy no mpirotsaka ho fidiana tiany indrindra handray ny toerany.
Raha oharina amin’ireo firenena tsy refesi-mandidy eo amin'ny Sovietika taloha manodidina azy, sy i Sina mpifanolobodirindrina aminy, dia fahavalo antonony fotsiny ihany i Kyrgyzstan ho an'ny fanaovangazety malalaka.
Kanefa, satria mitsinjo ireo fomba hiarovany ny fisotroan-drononony mihoatra lavitra noho ny fifidianana hatao afaka valo volana izay tsy amelan'ny lalàm-panorenana azy hiditra i Atambayev, dia miaritra hazakazaka mikitaontaona tokoa ny media tsy miankina.